မျက်လုံးတွေက စိတ်နှလုံးသားရဲ့ ပြတင်းပေါက်ဆိုရင် အသားအရေက ကျန်းမာရေးကို ဆုံးဖြတ်သိမြင်နိုင်တဲ့ အရေပြားအပေါ်ယံလွှာပါပဲ။ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အသားအရေစိုပြေဝင်းပမှုက ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ခရင်မ်တွေ လိုးရှင်းတွေက သင့်အရေပြားကို ခဏတာကြည့်ကောင်းရုံသာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အထိ အသားအရေလေးစိုပြေဝင်းပ နေချင်ရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အစားအစာလေးတွေကို စားသုံးပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်။ ထောပတ်သီး ထောပတ်သီးက အသားအရေတင်းရင်းလှပအောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ နေလောင်ဒဏ်မှလည်း ကာကွယ်ပေးပြီး ပါးရေတွန့်ခြင်းကိုလည်း...
လူပျို၊ အပျိုဖော်ဝင်ပြီ ဒါမှမဟုတ် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ပဲ သင့်ကိုယ်သင် ရင့်ကျက်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလို့ အလိုအလျောက် ယူဆလို့မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့လူတွေက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေရှိပေမယ့်လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်တော့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ အဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်။ သင့်ကို ကလေးဆန်တဲ့ သို့မဟုတ် မရင့်ကျက်သေးသူတစ်ယောက်လို့ သူများအပြောခံနေရတာတွေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် တချို့သောလက္ခဏာရပ်တွေကို ပြသဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ တခြားသူတွေအတွက် ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပေးတတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင့်ကျက်ပြီဖြစ်တဲ့...
ညဘက်အိပ်စက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်းကြပ်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့၊ ကောင်းမွန်တဲ့အနားယူခြင်းတွေရရှိစေဖို့အတွက် ပေါ့ပါးချောင်ချိတဲ့အဝတ်အစားမျိုးတွေကိုသာဝတ်ဆင်ပြီး အိပ်စက်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူငယ်တွေအနေနဲ့ ညအိပ်ယာဝင်တဲ့အခါ အတွင်းခံမဝတ်ဘဲ (သို့) အဝတ်မပါဘဲ ဘာလို့အိပ်သင့်သလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အိပ်ပျော်စေတယ် အတွင်းအဝတ်အစားတွေမပါဘဲ အိပ်စက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို အအေးဓာတ်ဖြစ်စေကာ အိပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ ပြောနေခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန် အိပ်ပျော်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်တာဟာ ညအိပ်နေချိန်အတွင်း ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အပူချိန်အရမ်းထွက်တာမျိုးကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး သင့်ကို...
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတစ်ခုဆီ ( သို့) တစ်ခုထက်ပိုတာတွေရှိကြပါတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ လူတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ဟာ သူတို့ဘာကိုထူးချွန်ကျွမ်းကျင်ကြသလဲဆိုတာကို သိသလို သူတို့အရည်အချင်းကို အသုံးချပြီး အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သောလူတွေကြတော့ သူတို့မှာဘယ်လိုအရည်အချင်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားသလဲဆိုတာမသိသလို ဘာကိုလုပ်ရမယ်မှန်းလည်း နားမလည်ကြပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ သူတို့တော်တော်များများဟာ မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ ဘဝကိုပင်ပန်းတကြီး ဖြတ်သန်းရလေ့ရှိပါတယ်။ သင့်မှာ ဘယ်လိုအိပ်မက်တွေရှိလည်းဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားပါ ဟိုးငယ်ဘဝက...
ကျနော်တို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစာအဟာရတွေထဲမှာ ဗီတာမင်ဓါတ်တွေပါရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သောလူတွေက နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အဟာရတွေထဲကရရှိတဲ့ ဗီတာမင်တွေဟာ သူတို့အတွက်လုံလောက်တယ်လို့ မခံစားရတဲ့အခါမှာတော့ ဗီတာမင်ဖြည့်စွတ်ဆေးများကို သုံးစွဲကြပါတယ်။ ဗီတာမင်ဖြည့်စွတ်ဆေးတွေက ကျနော်တို့အတွက် အကျိုးရှိစေသလား၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေသလားဆိုတာ သိစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗီတာမင်-စီ လူအများစုက ဗီတာမင်-စီဖြည့်စွတ်ဆေးတွေဟာ အအေးမိတာကိုကုသရာမှာ ကောင်းမွန်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာမှုများအရ အချို့သောလူများတွင်သာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးအချို့သောသူများတွင် မည်သို့မျှ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့မှာ...
ကြင်နာတတ်တဲ့သူတွေသည် အခြားသူများထက် ဘာလို့ပိုပြီးထူးချွန်ကြတာလဲ?
ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရ ကြင်နာမှုနဲ့ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားမှုကြားမှာ ခိုင်မာတဲ့ချိတ်ဆက်မှုမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစုံတယောက်ကို နားလည်ပြီး ဂရုစိုက်ပေးတာ၊ ထောက်ထားညှာတာပေးတာဟာ အားနည်းချက်ရှိတာ၊ စိတ်အားငယ်တတ်တာလို့သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လက္ခဏာတရပ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြင်နာတတ်တဲ့လူတွေဟာ ဉာဏ်ရည်ပိုမြင့်မားကြပါတယ် သိပ္ပံပညာရှင်ရစ်ချက်ဒေးဗစ်ဆန်ရဲ့ သုတေသနပြုချက်အရ ကြင်နာတတ်ခြင်းသည် ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုပြီး ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေကိုထက်မြက်စေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ကြင်နာတတ်စေဖို့ သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာတွေကို တိုးပွားလာစေနိုင်ပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့...
အာသွက်လျှာသွက်ရှိတဲ့ ကြာသပတေးသားသမီးတို့အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကြာသပတေးသားသမီးတွေဟာ ဂျူပီတာဂြိုဟ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံထားရတဲ့ နေ့နံတွေဖြစ်ကြပြီး လူသားတိုင်းရဲ့ ဘဝကို အများကြီးကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့သူတွေလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ သူတို့တွေဟာ တိုးတက်မှု၊ အကောင်းမြင်မှု၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အကောင်းမြင်မှုတွေနဲ့ ဟာသဥာဏ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှည့်စားတတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ဘဝမှာ မြင့်မြတ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို အသုံးချရင်း ရှင်သန်တတ်ကြသူတွေပါ။ ကြာသပတေးသားသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာ...
လူတွေ လိမ်လည်ကြရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်
ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာရှင် Bella De Paulo က “The Many Faces of Lies”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သုတေသနပြုခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ (သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို မထိခိုက်ဖို့ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေ၊ထင်မြင်ချက်တွေကို လိမ်ညာပြောဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်။ လိမ်လည်သူတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အမြင်တွေနှင့် သီအိုရီများစွာ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အချို့က လိမ်ပြောနေပြီဆိုရင်...
လူအများကြား ပြောရဲဆိုရဲရှိဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ?
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ရတဲ့ project တခုကို ဆွေးနွှေးတင်ပြတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် အကျိုးတူပေါင်းသူမျိုးကို ရှာဖွေတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယုတ်စွအဆုံး အလုပ်နေရာအသစ်အတွက် အင်တာဗျူးဖြေဆိုတာမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလိုပြောဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာ ကိုယ့်ဘက်ကပြောဆိုတဲ့စကားတွေဟာ လူတဘက်သားကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင် စွဲဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေဟာ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်နိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲဆိုတာမျိုးကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ ဖိအားတွေကို ကြိုတွေးထားပါ စကားပြောဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာ တင်ဆက်ပုံကအရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို...
ပိန္နဲသီးဟာ အဆန်းတကြယ်ဖြစ်တဲ့ အသီးမျိုးမဟုတ်ပေမယ့်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ တော်တော်အကျိုးရှိစေတဲ့ အသီးတမျိုးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပိန္နဲသီးကို စားသုံးတာဟာ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာနိုင်သလဲဆိုတာ သိစေနိုင်ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖျားနာခြင်းကို တိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် အအေးမိ၊ ဖျားနာခြင်း အစရှိတဲ့ရောဂါတွေဟာ လူတိုင်းမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပိန္နဲသီးတွင် ဗီတာမင်-စီ ၂၀မီလီဂရမ် ပါရှိပြီး ဗီတာမင်-စီဟာ အအေးမိခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း အစရှိတာတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီတာမင်-စီသည် ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး...